သူမ (ကဗျာတို) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သူမ (ကဗျာတို)
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Feb 19, 2012 in Creative Writing, Poetry | 23 comments
ကျွန်ုပ်၏ ထက်သန်လှသော ကဗျာ လက်စောင်းကြောင့် အမည်မသိ ကမ္ဘာကျော်၊ မြန်မာကျော်၊ အကုန်ကျော် မဂ္ဂဇင်းကြီး၏ မျက်နှာဖုံး စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြခံခဲ့ရသော ကဗျာတစ်ပုဒ်အား ဤနေရာမှာ ရွာသူားအပေါင်း သိစိမ့်သောငှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါ၏ (အမှန်ကား ရေးမိရေးရာ ရေးသားထားသော ကဗျာသာ ဖြစ်၏ ) ။ ကျွန်ုပ်၏ ချစ်တတ်လှသော နှလုံးသားကြီး ပေါက်ကွဲပြီးနောက် ပေါက်ဖွားလာခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ကဗျာငယ်အတွက် ကျွန်ုပ်အား ရက်စက် သွားခဲ့သော ချစ်သူအား ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါကြောင်း … (အမှန်ကား သူငယ်ချင်းရဲ့ အသဲကွဲဖီလင်ကို ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းသာ ဖြစ်၏ ) ။
ဖတ်ချင်သလိုဖတ်၍ မန့်ချင်သလို မန့်သွားကြပါကုန် ….
အနန္တ စကြဝဠာ မဟာရာဇာ အံစာတုံး
အပျင်းပြေ …… တဲ့ ။
(သူမ မဖတ်ခဲ့သော ကဗျာများ)
(စာကြွင်း။ လူချ = ကလေးတွေကို ရိုက်သော အိမ်ထောင်ရှင်မဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်) …
ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ ကိုကင်းရယ် ..
အခုတော့ လူချ ဆိုတော့ လန့်သွားတာပဲ ….
တော်သေးတယ် စာကြွင်းလေး ပါလာလို့ …
ဒါနဲ့ အခုတလော ကိုကင်းတစ်ယောက် ပျောက်နေပါလားဗျ … ။
(မှတ်ချက်။ ကာရံညီအောင်ပြောခြင်းဖြစ် အမှန်တော့ မြန်နှုန်းမြင့်တဲ့ နေပြည်တော်ရောက်နေပေမယ့် သုံးချိန်မရှိလို့ပါဗျ .. ဒါနဲ့ စကားမစပ် ရွာထဲမှာ လိုက်မမှီအောင် စာတွေကများနေတယ် … ဟူး ဖတ်ဖို့ အချိန်က မလောက်တော့ ခက်ပါ့ဗျာ )
ဟိုက် … အလန်းဇယား ပါလား …။
သူ့ကဗျာက ပိုတောင် ထိသေး .. ဟေ ဟေး …
ပေါက်ဖော် ဘယ်ပျောက်နေတုန်း ဖရဲရဲ့ … ။
ထိုင်နေတာ ကြာပြီ သူ့တွေ့ရသေးဘူး … ။ သူရှိရင် ပိုမြိုင်မယ် ထင်တယ် …
ငါ့ နှလုံးကို စားဖို့ လက်ကိုဆန့်ထ
အော် ကဝေထက်ဆိုးတဲ့ တစ္ဆေ….
ကျုပ်တော့ ကဝေ ထက် တစ္ဆေကို
အိမ်အပြန် လေးဘက်ထောက် …
ဂလောက် … ဂလောက် … ဂလောက် …
အဆိုတော် တာရာ ရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော့် ရဲ့ မိုက်မည်းမှုပဲ
ခင်ဗျားလည်း မိုက်မည်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ပဲ
ဟုတ်ပါတယ် ဦးဘလက်ရေ ..
ကျွန်တော် သူမကို ချစ်ခဲ့မိတာကိုက မိုက်မဲတာပါ ..
ဒီလောက် မိုက်လှတဲ့ ငမိုက်သား ငမိုးရိပ် သေစမ်း … ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြိမ်စင်္ကြာနဲ့ ရိုက်လိုက်တယ် ..
ဖြန်း … ဖြန်း … ဖြန်း …
သူမ မဖတ်သွားပါပေမယ့် ကျနော်တို့ ဖတ်သွားပါတယ်နော်။အသဲကွဲသမားချင်းမို့ 
ကိုနာဂ က အသည်းကွဲသမားကြီး ဆိုပဲ ..
လာရောက် ဖတ်ရှုသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ …
အကယ်ရွေ့ကိုအံဂျီး သည်သာ ၁၈ နှစ်သားဖြစ်ခဲ့ရွေ့ 
သူမ သည်သာ ၁၆နှစ်သမီးအပျိုမ ဖြစ်ခဲ့သော် ။
“ ၁၆ နှစ်မ….. ၁၆ နှစ်မ ”
အင်း ကိုပေ လုပ်လိုက်မှပဲ
အသက်တွေတောင် ပြန်ငယ်ချင်တွားပီ …
ဒက်စ် ရွိုက် … ဒက်စ်ရွိုက် ..
( သုံးသပ်ခြင်းကဗျာ )
( ပေါက်ကွဲခြင်းကဗျာ )
ငါ့အချစ်ကို ကတ်ကတစ်ငါးလို ဟင်းချက်စားတဲ့ကောင်မ
ဒင်းအဘ ဘုန်းကြီးကျောင်းလာရင် ဆရာတော်ကို နားချခိုင်း
ဒင်းနဲ့ငါ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့ညမှာ တောထွက်မယ်
ဆော်ကြည်က ခက်မည် …
မျက်နှာကို ခပ်တည်တည်ထား …
သောက်ပြီး မနက်ကျမှ လာကိုက်တဲ့ အရက်
များကြီးသောက်ပြီး ခေါင်းမကိုက်တဲ့အရက်မရှိတာ ဒေါခွီးတယ်